Madzimai eHormoni powder series suppliers - AASraw powder
/ Products / Mahormone echikadzi
Isu Madzimai eHormoni mupfumi vanotengesa, Madzimai eHormoni poda yekutengesa, Sezvatavimbisa, yese yeHommine yeHommoni yeupfu inenge yakachena kunze kwe98%.
Madzimai eHormoni powder
Mahomoni ane zvinhu zvakawanda zvinokosha pahutano hwevakadzi. Mahomoni evanhukadzi, isrogen uye progesterone, anozivikanwa zvikuru nokuti ane simba pamusoro pehutano hwehutano hwomukadzi, kubvira pakuenda kumimba kusvika pamuviri kusvika pakuguma kwemazuva uye nezvimwe. Asi muviri wako unoitawo uye unoshandisa mamwe marudzi akawanda ehomoni inobata mamwe maitiro ehutano hwako-kubva pane simba rako, uremu, mafungiro uye zvimwe zvakawanda. Zvakawanda zvinoshandiswa mukati memakore zvinotungamirira kumwedzi (perimenopause) zvinounzwa kuburikidza nekuchinja mazana ehomoni anokonzerwa nemashizha, zvikurukuru estrogen.
Izvo zvakagara zvichingofungidzirwa kuti uku kukura kwemazamu muvacheche kuri kukonzerwa nemadzimai mahormone upfu (oestrogens) mumuviri waamai unopfuura nepascenta panguva yekuzvitakura uye kukurudzira kukura kwemazamu mumwana.
Iyo inonyanya kukosha mahomoni inowanikwa nemaovhesi inozivikanwa semadzimai evanhukadzi zvepabonde (sex steroid) - uye mbiri mbiri ndeyo estrogen uye progesterone. Mazai emuviri anowedzerawo mamwe ehomoni, testosterone.
Munguva yekuyaruka, estrogen inokurudzira kukura kwezamu uye inokonzera hutano, chibereko (chibereko) uye Fallopian tubes (inotakura mazai muchibereko) kuti ikure.
Inoitawo basa mukukura uye inoshandura kugoverwa kwemafuta pamuviri wemusikana, zvinowanzoita kuti zviiswe zvakanyanya muchiuno, magaro nezvidya. Testosterone inobatsira kusimudzira mhasuru uye bone kukura.
Estrogen. Sokutanga kwe "female" hormone, estrogen inokurudzira kukura uye hutano hwemadzimai ehutano hunobata uye inochengetedza hutachiona hunyorova, kutonhora (kutambanudza), uye kunowanikwa neropa. Estrogen mazinga anowanzoperera panguva imwe chete, asi vanozviita nenzira yakasiyana-siyana. Dzimwe nguva kunogona kuva neserogen yakawanda panguva yekutarisa kupfuura yekare.
Kuwedzera kune isrogen, mazana emamwe mahomoni anokonzerwa nemapirovhisi-progesterone (imwe hormone yevakadzi) uye testosterone (inoridhe inonzi hormone inobudiswa pamadzimai maduku pakati pevakadzi) -yiwo inoshandura mukati mako makore emakore, sezvinotsanangurwa mu tafura iri pasi apa.
Nhengo dzakaderera dzinoderera muprogesterone dzinosvika panguva yekuenda kumwedzi kudarika dzinobata basa repabonde, asi kuora kwehupombwe mu testosterone kunogona kuderedza libido (zvekuita zvepabonde) pakati pevakadzi vekati, kunyange zvazvo ichi chinoramba chiri kukakavadzana. Ichokwadi kuti estrogen inodarika zvinopfuura testosterone inotungamirira vamwe kuti vatende kuti libido haifaniri kumira pakuenda kumwedzi. Kupera mu testosterone muvakadzi kunongoberekwa chete, kusati kwasangana nemurume, uye kunotanga makore asati asvika.
Estradiol powder (E2), uyewo spelled oestradiol, inonzi estrogen steroid hormone uye yakakura yevakadzi sex hormone. Iko kunobatanidzwa mukugadzirisa kwe-Estrous nekuenda kumwedzi maitiro ekuberekwa kwevakadzi. Estradiol powder ndiyo inokonzera kukurudzirwa kwevakadzikadzi zvepabonde zvepabonde zvakadai sezamu, kuwedzerwa kwehudyu, uye chikadzi chekugovera mafuta kuvakadzi uye zvinokosha pakuchengetedza nekuchengetedzwa kwemishonga yekuberekwa kwevakadzi sekuita mammary glands, chibereko , uye vagina munguva yekuyaruka, munhu mukuru, uye pamuviri. Izvo zvinewo zvinokosha mune zvimwe zvipembenene zvakawanda zvinosanganisira bone, mafuta, ganda, chiropa, uye uropi.
MASHOKO anonyanya kugovera inopa powders yakasuru eestrool powder, estradiol powder Benzoate, estradiol powder valerate, ethinyl estradiol powder, etc. Zvose zvinotsigirwa nokuda kwekunatswa, kunaka uye kugadzikana.
Kuratidza 1-8 ye 20 migumisiro